I-SOAPSTONE COUNTERTOPS (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi I-Soapstone Countertops (Isikhokelo sokugqibela)
I-Soapstone Countertops (Isikhokelo sokugqibela)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokugqibela kwiitafile zeesepha ezintle kubandakanya iindlela ezahlukeneyo zoyilo lwekhitshi.
Ke usenokuzibuza ukuba zithini kanye iitafile zamatye esepha? I-Soapstone iye yaba yinto eyaziwayo ekhethiweyo yokubala ekhitshini ngenxa yobuhle bayo kunye nokusetyenziswa kwayo. I-Soapstone idumisa igama layo ukusuka kwisepha esifana nomphezulu womhlaba. Ifana negranite okanye imarble, ilitye lesepha yinto yendalo. Ilitye lesepha xa lisetyenziselwa imiphezulu yeetafile yasekhitshini iqulethe ukujongwa okuphezulu kwequartz ukunceda ukuba yomelele ngakumbi ekusebenziseni usuku nosuku.
Eli litye ngokwendalo liqukethe i-talc, ke xa kuthelekiswa namanye amatye afana ne-quartz okanye i-granite, ilitye lesepha yinto ethambileyo, yiyo loo nto ilitye lesepha elinomxholo ophezulu we-talc yinto eyaziwayo yabadwebi bemifanekiso eqingqiweyo. Kwiitafile zetafile, ilitye lesepha elinomxholo osezantsi we-talc kuyacetyiswa njengoko kufanelekile ngakumbi ngaphakathi kunye nokusetyenziswa koyilo.
I-Soapstone Countertops Pros kunye ne-Cons
Iindleko zeTafile zeComputer
Imibala yeSepha yamatye
Imiphezulu yeetafile zesepha emnyama
Amacwecwe eSepha aMhlophe
Imiphezulu yeetafile zesepha eluhlaza
IiComputer zeSepha zeGrey
Imiphezulu yeetafile zeSepha zeSepha
Ukunyamekela ii-Soapstone Countertops
Imiphezulu yeetafile zeThayile yamatye
Kuphi ukuthenga ii-Countertops ze-Soapstone
Iingcamango zeComputer Countertop Iingcamango
Ngenxa yobuhle bendalo kunye nokuqina kwelitye lesepha kuhlala kusetyenziselwa usetyenziso olunje ngee-countertops ekhitshini nakwindawo yokuhlambela, iisinki kunye nendawo ejikeleze umlilo. Ngokungafaniyo nezinye iintlobo zamatye eesepha akufuneki zitywinwe okanye zingcoliswe, nangona kunjalo abanini khaya abaninzi bathambisa ioyile okanye i-wax kumphezulu ubuncinci kabini ngonyaka ukunceda ukuba ihlale ikhangeleka intsha.
I-Soapstone ayinayo i-porous, oku kuthetha ngokungafaniyo negranite okanye amanye amatye angena ngaphandle, awudingi ukutywina le nto rhoqo ukuyigcina ikwimo.
Ngenxa yokuba le nto ixinene kwaye ayinayo i-porous, ayibambi ibhaktheriya, ayonakalisi, kwaye kulula kakhulu ukuyicoca.
Ngokungafaniyo nezinye izinto ezinoluhlu olungqongqo lweearhente zokucoca ezinokusetyenziswa, ilitye lesepha linokucocwa ngokulula ngesepha namanzi okanye nayiphi na into esetyenziselwa ukucoca. Iiasidi ezivela kwiilamuni kunye nezinye iziqhamo aziyi kuchaphazela izinto.
Awudingi ukutywina le nto. Ioyile yokutya yodidi lokutyiwa yanele ukugcina i-sheen yayo
Kulula ukuphinda ugcinwe endaweni yeetshipsi okanye imikrwelo
Ngenxa yokuba ithambile, unokukrola ngokulula okanye wenze izinto ezinje nge-drainboard, okanye wenze isinki edityanisiweyo usebenzisa isiqwenga setye yelitye.
Kulula kwi-DIY kuba ungayinqumla usebenzisa isarha yetyhula enesiphuphu.
Ukumelana nobushushu-ngenxa yoko akukhoxhala lokuqhekeka kumphezulu xa ubeka ipani eshushu ngaphezulu kwayo.
Ingasetyenziselwa ngaphakathi nangaphandle
Indibaniselwano yeekhabhathi ezimhlophe, imabhile emhlophe kunye nelitye elimnyama lesepha, izibambo zensimbi zegolide kunye neenkuni eziluhlaza ziyila ngokugqibeleleyo le ndlela yokujonga ikhitshi yanamhlanje elula kunye nekhululekile.
Ixabiso - ilitye lesepha linokuxabisa kakhulu njengakwinqanaba leprimiyamu imiphezulu yeetafile lenyengane , esisixhobo esinzima
Ukuthamba kwayo kuthetha ukuba kuthanda ukukrwela kunye nokuqhekeka (ekunokulungiswa ngokulula ngesanti)
Iza kuphela nge-7 'okanye i-84' ubude, ke oku kuthetha ukuba kuyakufuneka ube nemigca emininzi kwikhawuntari yakho ukuba unexesha elide.
Itshintsha umbala ngokuhamba kwexesha- kwabanye, inokuba yipro esikhundleni sekhonkco, kodwa yigcine engqondweni ukuba ilitye lesepha ngokwendalo limnyama ngokuhamba kwexesha. Ukongeza ioyile yamaminerali kuya kunceda ukukhawulezisa le nkqubo yobumnyama nayo
Ngokuxhomekeke apho ilitye lakho lesepha lifunyenwe khona kunye nomxholo walo we-talc, ilitye lesepha linokuhla ukusuka kwi-45 ukuya kwi-85 yeedola. Ezi ndleko ziya kuchaphazeleka ngokuxhomekeka kwindawo okuyo, iindleko zokufaka (ukuba usebenzisa izifakeli zobungcali), ubukhulu be-slab yakho, ukumiselwa kunye nezinye iimfuno ezizodwa zokwenza izinto (ukongeza iibhodi zedreyini, ukuvuleka kokufakwa ngaphakathi, njl.
Ukufakwa, ilitye lesepha linokubiza malunga ne-60 yeedola ukuya kuthi ga kwi-105 yeedola ngeenyawo zekwere. Zithelekiswa nexabiso lenyengane ephezulu.
Isilayidi esityebileyo setye lisetyenziselwe ukufezekisa ukujonga kwesi siqithi sasekhitshini. Imigca emhlophe enesibindi kwilitye lesepha kubonakala ngathi ilingisa ukugqitywa kwezinto zakudala zemilenze / iikholamu zesiqithi sasekhitshini.
Ilitye lesepha ngokwendalo liza ngemibala ethintelwe kakhulu, ubukhulu becala kwimibala engwevu. Ukugqunywa kwamatye esepha kuyahluka ukusuka enkwalini kuye enkwalini kunohluka ukusuka kumncinci kuye komkhulu. Nangona ezinye zinokuba neengcebiso eziluhlaza okwesibhakabhaka okanye eziluhlaza, imibala ebonakalayo ihlala imhlophe, ingwevu okanye mnyama. Njalo gcinani engqondweni ukuba ilitye lesepha ngokwemvelo libumnyama ngaphezu kwexesha, ngoko qaphela oko xa ukhetha umbala wakho wesitye.
Amatye esepha aqhele ukufumaneka ngombala omnyama onobungakanani obuhlukeneyo bemithambo kunye neepateni, kuxhomekeke kwikwari yelitye lakho lesepha. Uninzi lwamatye amdaka amnyama amnyama aya kuba mnyama mnyama ekuhambeni kwexesha, ke yigcine engqondweni.
Iimvumba ezimnyama ezizodwa zongeza iipateni ezifihlakeleyo kunye neenkcukacha kule ndawo yokuphamba emnyama yamatye. Umhlaba omnyama ugcwalisa ngokulula iifayile ze- zonke iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe kunye nodonga olumhlophe lwecala.
Ufuna imiphetho ethambileyo? Ilitye lesepha yindlela eya kuyo! Ngenxa yokuba ilitye lesepha lithambile, kulula ukubhuqa kunye nokuthambisa imiphetho yayo eqinileyo kunye neekona. Ukujikeleza imiphetho kunye neekona akuniki kuphela i-vibe eyahlukileyo, ikwenza ikhitshi lakho likhuseleke kubantwana nakubantu abadala ngokufanayo, kuba kukho iingongoma ezingacacanga ezibetha ngengozi.
Le khitshi yesitayile saseFrance inendibaniselwano eyahlukileyo yekhabhathi emhlophe yekhitshi ebhangqwe ngamatye esepha amnyama kunye neebhloko zokubala. Ukugqitywa kwe-matte yee-countertops kunceda ekunciphiseni ubunzima beenkcukacha zeekhabhinethi, ukunika ikhitshi ukuziva ngakumbi.
Ezinye izinto zokubala zamatye esepha, ezinje Uyilo lwepeninsula yasekhitshini , babe neepateni eziziinkozo ezincinci kakhulu / ezifihlakeleyo. Ekuhambeni kwexesha, okanye xa ifakwe kwiileyile zeoyile, inokuba mnyama ngokwaneleyo kangangokuba ijongeka ngathi imnyama yonke.
Musa ukulindela ukuba umhlophe ococekileyo njenge-quartz kumatye esepha. Uninzi lwamatye emvelaphi amhlophe anemilinganiselo eyahlukeneyo yemithambo engwevu ethe saa, ngenxa yoko iya kubonakala ngathi ikhaphukhaphu ngakumbi kunombala omhlophe. Ukuba unethamsanqa, uya kuba nakho ukufumana islabhu emhlophe ngakumbi kunengwevu.
I-honeymoon suites kwi-las vegas
Esi siqithi sasekhitshini sinesitafile esimhlophe esimhlophe esimhlophe esinombala okhanyayo ongwevu.
Uyilo lwangoku lwekhitshi lubonisa ikhabethe elingwevu elidityaniswe nazo zonke izinto zokubala ezimhlophe zeesepha.
Amatye esepha aluhlaza aseFinland adume ngalo mbala uluhlaza uluhlaza unika ithint eluhlaza kwilitye lesepha. Ziza ngeendidi eziluhlaza ngokunjalo.
Ngelixa uninzi lwamatye esepha eza nemibala eyahlukeneyo engwevu, emhlophe kunye emnyama, unokufumana islabs yamatye eneengcebiso zezinto eziphantsi eziluhlaza ezifana nezi zinto zokubala zamatye eesepha ziluhlaza eFinland. Inepateni emhlophe ehlukileyo emhlophe eyenza ukubala komphezulu wobuso kuphume ngcono kancinci ngokuchasene nekhabhathi yokhuni.
Ikhitshi eliphefumlelweyo laseFrance ngokuqinisekileyo lenze ukuba kusetyenziswe indawo kunye nokugcinwa koyilo lwekhitshi. Imigca emhlophe enesibindi kwitafile yelitye elihlaza emnyama yongeza isandi esothusayo kwisilayidi esikhulu esisetyenziswa kwisiqithi sekhitshi.
IiComputer zeSepha eziMnyama
Ilitye lesepha ngokufuthi linemithambo emhlophe ebukekayo ekhangeleka inomtsalane kwaye inokunika ukukhanya okungasemva. Zingasetyenziselwa imiphezulu yeetafile yesiqithi, imiphezulu yeetafile yempophoma kunye nomqolo obonisa iziphumo ezintle.
Leli khitshi lisebenzisa i-slabs e-grey slabs yelitye kwisiqithi sekhitshi, i-countertop kunye ne-backsplash. Iinkcukacha zemithambo emhlophe eqaqambileyo ngokuchasene nomphezulu wokubala ongwevu wongeza imvakalelo yanamhlanje kwikhitshi yesiko lendabuko.
Ilitye elimnyama lesepha elimnyama lifana ncam kunye neethayile ezimhlophe nezimhlophe zemabhile engaphantsi komhlaba kwaye ime kakuhle ngokuchasene nekhabhathi ezimhlophe zekhitshi.
Iifama ezimhlophe zohlobo lweefama zasekhitshini ezidityaniswe nezikhawuntingi zamatye amnyama ezingwevu kunye nomqolo obuyela umva zenza ukubonakala okuqinisekileyo okukhoyo kwi-avant-garde kwaye akuphelelwa lixesha.
Ukuba uyayithanda inkangeleko yelitye lesepha kodwa ungafuni ukujongana nokuhlala uhleli kunye nokukrwela, emva koko ukwenza itafiki yelitye lesepha kunokuba sesona sisombululo sisiso. Okokuqala, unokujonga kwakhona ilitye lesepha esele lidityaniswe ne-quartz. Olunye uhlobo lwenza ukuba ilitye lesepha libe nzima, kwaye ke lilungele ukusetyenziswa kwekhawuntara yasekhitshini.
Ngaphandle koko, ukuba uhlahlo-lwabiwo mali olungqingqwa, unokwenza nje ilitye lesepha. Kukho izinto ezahlukeneyo ezinokubakho zokwenza oku, kodwa phakathi kwezona zidumileyo kukusebenzisa ii-laminates (zinokubonakala zicacile), usebenzisa ipeyinti okanye ukusebenzisa i-epoxy. Ukuba uyi-DIY'ing, khetha eyona ndlela ifanelana nezixhobo zakho ezikhoyo kunye nokuseta ubuchule!
Zininzi ke nazo Iindidi zemiphezulu yeetafile zekartz ezinokubonelela ngenkangeleko efanayo kwilitye lesepha.
Umgangatho ongenasiphelo welitye lesepha wenza kube lula ukuwucoca njengoko ungagcini ndawo. Nawuphi na umngxunya omncinci okanye imikrwelo nayo inokulungiswa ngesanti ekhanyayo kunye nongqameko lweoyile yamaminerali yokutya. Kuba le nto ayifuni kutywinwa, ngamanye amaxesha i-sanding kunye neoyile yamaminerali yiyo yonke into efunekayo ukugcina le nto.
Njengoko ilitye lesepha yinto ethambileyo, kulula ukuyisika kuninzi lwezinye izinto zomphezulu wee-countertop, ke iya kukugcina iindleko ukuba unolwazi olusisiseko lwe-DIY. Nantsi indlela yethu elula ecetyiswayo yokusika ilitye lesepha:
Sebenzisa iphepha elincinci leplywood ukuze usebenze njengetemplate esisikiweyo. Ngale ndlela, naziphi na iimpazamo zemilinganiselo ziya kuncitshiswa (kwaye ziya kuba zingabizi kakhulu!). Nje ukuba ugqibe ukusika iplywood, ungasebenzisa le milinganiselo njengesikhokelo sokusika ilitye lesepha.
Sebenzisa imela ukufumana amanqaku / uphawule imiphetho kwilitye lesepha, usebenzisa itemplate yakho yeplywood njengesikhokelo.
Lungisa itafile / umphezulu wakho wokusika. Qiniseka ukuba kwinqanaba lokuthintela ukukhutshwa kunye nomonakalo kwilitye lakho.
Sebenzisa isarha ejikelezayo okanye ijigsaw kwaye uncamathisele iincakuba ezinencam yedayimane. Ungakulibali ukugubungela amacala e-saw blade ngetheyiphu ukunqanda ukonakalisa ilitye.
Nxiba izixhobo zakho zokhuseleko kwaye uqhubeke nokusika kwisiqingatha sobunzima belitye, usike ubunzulu obushiyekileyo emva koko. I-Bothoth emanzi kunye nokusika okomileyo kunokwenzeka.
Isanti kwimiphetho yelitye lentlabathi, ukuqala nge-80-grit, ukwandisa i-grit ngokuthe ngcembe ukuhambisa umphezulu.
Ukhetho: Yongeza umaleko weoyile yamaminerali ukongeza i-sheen kwaye wenze mnyama ilitye lesepha.
Ukusetyenziswa kwangaphandle, ilitye lesepha lisenokukhetha. Ubume bayo obungenayo i-porous bulungele ngaphandle, njengoko bungazukufunxa iintsholongwane kumbindi wayo. Oku kuyenza ukuba inyamezele ukufuma kunye nomonakalo onxulumene nemozulu.
Hlala uhlala ukhumbula ukuba ilitye lesepha lithambile kunezinye izinto eziqhelekileyo ezinje ngegranite, ke gcina kude kwizinto ezinzima, ezinzima okanye nayiphi na indawo ekuyichazayo kwiimpembelelo zomhlaba ezinokwenzeka, njengoko ilitye lesepha lisikiwe ngokulula kwaye lifiphele.
Kuxhomekeka kwindawo okuyo, ukufumaneka kwelitye leesepha kunye neentlobo ziya kwahluka. Uninzi lweevenkile zokwakha kunye neehardware ezithwala amanye amatye anje ngegranite, zinokuba nelitye lesepha.
Unokukhangela kwakhona ilitye lesepha okanye iivenkile zamatye endalo / iingcali kwindawo yakho ukuze ukhethe ngakumbi kunye neengcebiso ezineenkcukacha kunye nezikhokelo zokufaka. Abathengisi abaninzi bamatye banokuhambisa kwaye bamkele ii-odolo kwi-Intanethi, ke ukuba ixesha kunye nokusebenziseka lula ngumcimbi, ukukhangela kwi-intanethi okulula kuya kukunika uluhlu lwabathengisi abakungqonge indawo yakho.
iikhabhathi ezingwevu imiphezulu yeetafile emhlophe
Uyilo oluhle lwasekhitshini lubonisa imiphezulu yeetafile yesepha emnyama kunye ne-backsplash ngokuchaseneyo nesiqithi esimhlophe semarble esinegrey base cabinet. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zonke zimhlophe zimhlophe ngomgangatho ocebileyo ngomthi kulo lonke ubeko.
Isheen ethambileyo yelitye lesepha elimnyama elisetyenziswe kwitafile ephambili yinto entle eyahlukileyo kumphezulu ocwebezelayo we-quartz ye-beige esetyenziswe kwisiqithi sekhitshi ngaphezulu. Umnyama ukongeza ubunzulu obuhle kunye nokwahluka kombala kuba uninzi lwendawo isebenzisa imibala emhlophe okanye emhlophe e-brown / beige.
Eli khitshi lihamba umgca phakathi kokukhanya kunye nomnyama kunye neetafile ezimnyama zentsimbi zentsimbi ezidityaniswe nesiqithi esimhlophe esiphikisayo. Isiqithi uqobo lwaso sinekhabhathi emnyama engwevu ngelixa iikhabhathi eziphambili zekhitshi zimhlophe. I-backsplash emhlophe ye-Arabesque inceda ukongeza ubumbano kunye nokugcina izinto zijongeka ziqaqambile.
I-Rustic sage eluhlaza ngokuqinisekileyo yongeza i-pop epholileyo kunye ne-funky kuyo yonke into yokumisa ikhitshi emhlophe, kunye nokongezwa kweetafile ezimnyama zamatye okugqiba ukujonga ukujonga okulula kodwa okunesibindi kule ndawo yasekhitshini.
Ngaba awunakugqiba phakathi kwelitye lesepha kunye nemabhile? Kutheni ungazisebenzisi zombini? I-Soapstone kunye ne-marble zombini zinembonakalo ethambileyo kwaye zikhangeleka zilungile nakweyiphi na indawo, nokuba kukwiindawo zemveli okanye zangoku!
Leli khitshi elimhlophe linomthi omnyama we-countertop yonke ikhitshi edibene ne-mosaic marble backplash yokongeza iphethini encinci kunye nokuthungwa kwiindonga.
Kuba uninzi lwekhitshi lusebenzisa iinkuni ezigugileyo kunye nokunye ukwahluka kweenkuni ezigqityiweyo, umbala omnyama noqinileyo welitye lesepha elimnyama kwisiqithi sasekhitshini uyinto eyamkelekileyo kwipalethi ethe cwaka yendawo.
Kuyathandeka nje ukubona ukuba izinto ezindala zokwakha / zokugqiba zigcinwa zihambelana njani kuyilo lwekhitshi, ukunika ubuntu ngakumbi. Izitena ezindala kunye neenkuni ngokuqinisekileyo ziyanceda ukongeza into ye-rustic kumxholo omhlophe nomnyama wekhitshi osebenzisa ikhabhathi emhlophe kunye nelitye elimnyama lesepha.
Imigangatho emidala kunye neyomileyo eqinileyo kunye nemiqadi eyenziwe ngomthi ijongeka ngathi inenkohliso kwaye inesibindi, kodwa ithoniwe ngokudityaniswa kweekhabhathi ezimhlophe kunye neekhawuntari zeesepha. Ukongezwa kwendalo ye-oki yendalo kunceda ukongeza ubushushu kwindawo.
Izinto zokubala zesepha ngokuqinisekileyo yenye yezona zinto zibalaseleyo zokuya kwezixhobo ukuba uyokujonga okucocekileyo kweScandinavia. Iikhabhathi ezimhlophe ezityikityiweyo ngokuqinisekileyo zisebenza kakuhle ngobuqhophololo obufihlakeleyo betafile yesepha emnyama.
Ukusukela Umgangatho wekhitshi Olu luyilo sele lusebenzisa isileyiti esimnyama, ilitye lesepha elisetyenziselwa imiphezulu yeetafile lingwevu endaweni yokukhanya okuqhelekileyo okumnyama. Ukucwangciswa okungafaniyo kwemibala kunika ukulinganisela ngakumbi kunye nokuziva okunamandla ngakumbi kuyilo oluncinci lwendawo.
Ilitye lesepha elisetyenziswe kule khitshi linepateni ekhethekileyo ye-swirly esebenza njengendawo ekugxilwe kuyo kuyo yonke indawo yokuhlala ekhitshini.
Le khitshi inesitayile esinegrey esityebileyo sentsimi yesidlo sakusasa kunye noyilo olunemigangatho emibini yokulungiselela ukutya kunye nokuhlala kwezihlalo eziphakamileyo.
Enye yeenzuzo ezongezelelweyo zelitye lesepha kukuba ungenza isinki usebenzisa izinto ezifanayo kunye nokukrola i-drainboard kuyo. Lo mzekelo ubonakalisa a isinki yekhitshi zenziwe ngento enye yesepha njengeekhawuntari, kunye nebhodi yomdonga eqingqiweyo ngesinki ukunceda ukugcina ikhawuntari ecocekileyo neyomileyo.
Ukugcwalisa indawo encinci, ecwangciswe kakuhle yekhitshi emhlophe ziitafile ezimnyama zeesepha. Iikhawuntari kunye neekhabhathi zazenzelwe ukuba zilingane ngokugqibeleleyo kwisithuba esincinci ngelixa zisabonelela ngendawo eyaneleyo kunye nokugcinwa kokusetyenziswa okusebenzayo. Bona Okuninzi Uyilo olumhlophe kunye nomhlophe Apha.
Iingxowa zezipho zehotele zeendwendwe zomtshato
URyan reynolds kunye nemifanekiso ebomvu yomtshato kaJohansson
Zama okuqinisekileyo kwilokhwe yomtshato
zithini izifungo zomtshato
eyona nyanga ingcono yokutshata